Topnepalnews.com | नेविसंघ नुवाकोटको अध्यक्षमा आकांक्षीहरु यस्ता छन, को किन बालियो ? (विश्लेषण सहित)
नेविसंघ नुवाकोटको अध्यक्षमा आकांक्षीहरु यस्ता छन, को किन बालियो ? (विश्लेषण सहित)
Posted on: January 06, 2019 | views: 747
नेपाली कांग्रेसको प्रमुख भातृसंस्था नेपाल विद्यार्थी संघको १३ औँ अधिवेशनमा ३१ वर्षे उमेर हदबन्दी लागेसँगै नुवाकोटमा पनि अधिवेशनको सरगर्मी बडेको छ । नेबिसंघको वर्तमान समितिको दुई वर्षे कार्यकाल समाप्त भएपछि जिल्ला क्षेत्र र क्याम्पसमा नेबिसंघमा रहेका विद्यार्थी नेताहरु नै अध्यक्षका प्रमुख पदका दाबेदार छन ।
नेपाली कांग्रेसको नर्सरीको रुपमा लिइने नेविसंघलाई कांग्रेसभित्र प्रमुख शक्तिको रुपमा लिइन्छ । परिणाम स्वरुप नेविसंघलाई कांग्रेस वृतमा कसले आफ्नो पोल्टामा पार्ने भन्ने ध्याउन्नमा यतिवेला लागेका छन । नुवाकोट जिल्लामा अधिबेशनको सरगर्मी बढेसगै नेताहरुले आफ्नो उमेद्वारहरुलाइ क्रियाशिल हुन आग्रह गरीरहेका छन । नुवाकोट नेपाली काँग्रेस भित्र बर्चश्व राख्ने ठुला हाइट भएका नेताहरुको जिल्ला पनि हो । अर्जुन नरसिंह केसी,डा.रामशरण महत,डा.प्रकाश शरण महत,बहादुर सिंह लामा सहित ४ जना केन्द्रिय सदस्य रहेको जिल्ला पनि हो ।
यसकारण पनि याँहा नेसिबंघको अधिवेशन फरक र रोमान्चक पनि मानिन्छ । यस पटक नुवाकोट काँग्रेसको इतिहासमै नेविसंघको फरक किसिमको निर्बाचन हुनेछ । नेपाली काँग्रेसका २ ठुला नेताद्धय अर्जुन नरसिंह केसी र डा. रामशरण महत एक भएर नेविसंघको महाँधिवेशनमा आफ्नो उमेद्वार बनाउने भएका छन । नुवाकोटमा अधिबेशनको सरगर्मी बढेसगै १० जनाले आफ्नो आकाक्षाँ प्रस्तुत गरीरहेका छन ।
बिद्यार्थी नेताहरु,नित्यराज ढुङगाना,कृष्ण मिश्र,बिजय गुरुङ,नमराज सुबेदी,स्वएच्छा उप्रेती,पवन थापा,माधव शर्मा,शुर्वण श्रेष्ठ लगायतले जिल्ला अध्यक्षमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरीरहेका छन । माथीका उमेद्वार मध्यका कृष्ण मिश्र,नमराज सुबेदी,स्वऐक्षा उप्रेती,पवन थापा, शुर्वण श्रेष्ठ नेताद्धय अर्जुन नरसिंह केसी र डा रामशरण महत निकटका हुन भने नित्यराज ढुङगाना, बिजय गुरुङ र माधव शर्मा नेताद्धय डा प्रकाशशरण महत र बहादुर सिंह लामा निटकका हुन ।
धेरै आकाक्षी भएपनि अन्तिमसम्म २ टिमबाट एक–एक जना मात्र अध्यक्षमा प्रतिसपर्दा हुने देखिएको छ । अर्जुन नरसिंह केसी डा रामशरण महत पार्टी सभापति जगदिश्वर नरसिंह केसी र रमेश कुमार महतबाट साझा एक उमेद्वार बनाउने तयारी भैरहेको छ । नेपाली काँग्रेसले जिल्लामा ब्यर्होनु रहेको ठुलो हार सगै पार्टीलाई चलायमान बनाउन पनि नेताहरु एकैठाउमा उभिएका छन ।
अर्जुन नरसिंह केसी डा रामशरण महतले लोकप्रिय उमेद्वारलाई अगाडी बढाउने तयारीमा रहेका छन । बिद्यार्थी नेताहरु कृष्ण मिश्र,नमराज सुबेदी,स्वऐच्छा उप्रेती,पवन थापा, शुर्वण श्रेष्ठ गरी ५ जनामा सबैभन्दा लोकप्रिय उमेद्वारको रुपमा नमराज सुबेदीलाई लिइएको छ । भाबि पुस्ताको साथ संगठन प्रति बफादार,इमान्दारिता र नैतिकता सांङगठनिक सुधारको पक्षमा तथा बिद्यार्थी हकहितको पक्षमा दत्तचित्त भएर लागेका सुबेदी प्रबल दाबेदारको रुपमा छन ।
अग्रजको सम्मान र नयाँलाई प्रोहोत्सान गदै आएका सुबेदी साझा उमेद्वारको रुपमा रहनसक्ने बिश्वास लिइएको छ । जिल्लामा नै बसेर राजनिति गरीरहेका सुबेदी नेबिसंघको अध्यक्ष बन्ने संकेत देखिएको छ । जिल्लामा रहेका ठुला–ठुला क्याम्पसमा समेत उनको प्रभाब छुट्टै देखिएको छ । अन्य बिद्यार्थी नेताहरु काँठमाण्डौ केन्द्रित रहने र जिल्लामा खासै कार्यक्रममा मात्र देखिने भएकोले पनि सुबेदीलाई साझा उमेद्वार बनाउने देखिएको छ ।सुबेदीले बाम सरकारले बढाएको एकिकृत सम्पती करको आन्दोलनमा समेत नेबिंसंघको तर्फबाट अग्रणी भुमिका खेलेका थिए । उनि आन्दोलनबाट प्रहरी हिरासतमा समेत गरेका हुन ।
सुवेदी नेविसंघ राजनीति मात्र नभई नुवाकोटमा पछिल्लो ६ वर्षदेखि क्रियाशिल पत्रकारको रुपमा समेत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बहन गर्दै आउनुभएको छ ।
उहाँ हाल पत्रकार महासंघ नुवाकोटमा सहसचिवको जिम्मेवारीमा रहनुभएको छ । स्थानीयस्तरमा रहेका टेलिभिजनमा लामो समय सेवा पुर्याउनुभएका उहाँले उत्पादन गरेका अन्य पत्रकार हाल टेलिभिजन सञ्चालनमा रहेकाले उहाँको नेतृत्व र प्रेरणालाई नेविसंघको लागी पनि महत्वपूर्ण व्यक्तिको रुपमा समेत लिइएको छ ।
काँग्रेस प्रतिपक्षमा रहेका बेला उनको नेतृत्वमा जिल्लामा धेरैे रचनात्मक कार्यक्रम हुने बिश्वास लिइएको छ । नुवाकोटमा आफ्नो पक्षले नेबिसंघ बिजय गर्न नसकेमा केन्द्रमा समेत अर्जुन नरसिंह केसी र रामशरण महत कमजोर हुने र आगामी पार्टीको अधिबेशनमा नुवाकोटमा नै ग्रार्हो पर्ने भएकाले पनि जिल्लामा बसेर संगठन गरिरहेका सुबेदीलाई मैदानमा लेजाने तयारी गरिरहेका छन ।
नेविसंघ नुवाकोटको अन्य आकाक्षीँहरुलाई पनि बिभिन्न स्तरमा सुरक्षित गर्दै नेबिसंघको नेतृत्व आफ्नो पोल्टामा पार्न नेताहरु लागिरहेका छन । सुबेदी साविकको निर्वाचन क्षेत्र नं. १, २ र ३ मा नै बलियो देखिन्छन ।
दुईपिपलमा जन्मेर विदुर, त्रिशूली र बट्टारका विद्यालय र क्याम्पसबाट अध्ययन गर्नुभएका उहाँसंग धेरै स्थानका विद्यार्थीबीच राम्रो सम्बन्ध रहेको छ ।
विद्यालय राहत सामाग्री र स्टेशनरी सामाग्री वितरण, खानेपानी योजना निर्माणमा जिल्लाको धैरै बिद्यालयमा उहाँको नेतृत्वमा काम भएको छ । उहाँले विद्यार्थीको मुद्धासंग जोडिएका विद्यार्थीलाई सवारीसाधनमा ४५ प्रतिशत छुट सहुलियत कार्यान्वयन, बजारमा भएको कालोबजारी, इन्धनको मूल्य बृद्धिमा विपक्षी सरकार मात्र नभई आफ्नै पार्टीको सरकार रहदाँ पनि सशक्त विरोध प्रदर्शन, महिलाहिंसाका घटनामा विरोध प्रदर्शन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र र गणतन्त्र कार्यान्वयनको पक्षमा उहाँको संघर्ष उच्च रहदै आएको छ ।
बिद्यार्थीमाझ पपुलर रहेका कारण पनि सुबेदी बलियो उमेद्वार रहेको नेविसंघका विद्यार्थी बताउँछन् ।
बिद्यालय राहत सामाग्री,स्टेशनरी सामाग्री र खानेपानिका क्षेत्रमा जिल्लाको धैरै बिद्यालय पुगेका छन । बिद्यार्थीमाझ पपुलर रहेका कारण पनि सुबेदी बलियो उमेद्वार रहेको नेविसंघका विद्यार्थी बताउँछन् ।
आगामी अधिवेशनले दोस्रो पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने भएकोले पनि आसन्न अधिवेशनलाई चासो पुर्वक हेरिएको छ ।